AbeSundowns baqoqe imiklomelo kwiDStv Premiership
UMGADLI weMamelodi Sundowns uPeter Shalulile, uthole umklomelo womdlali ovelele kaMeyi. Isithombe: Ryan Wilkisky/BackpagePix
Intatheli Yezemidlalo | June 4, 2021
ABAQEQESHI beMamelodi Sundowns, uManqoba Mngqithi noRhulani Mokwena, bagixatshezwe ngomklomelo wabaqeqeshi abavelele benyanga kaMeyi kwiDStv Premiership.
Laba bachonywa lolu phaphe iSundowns isivele iyivikele ngempumelelo indebe yeligi kulandela ukwehlula iSuperSport United ngesonto eledlule. Lokhu ikwenze kusasele imidlalo emithathu kusongwe iligi.
Kusasa ngemuva komdlalo wokugcina neCape Town City eLoftus Versfeld ozoqala ngo-3 ntambama, izobe isiphakamisa le ndebe okwesine amasizini elandelana. ISundowns iyona ehamba phambili ngokudla isicoco seligi ngaphansi kwePremier Soccer League (PSL), isikwenza okwehlandla lika-11.
Phakathi kukaMeyi 2 noJuni 2 laba baqeqeshi bahole iSundowns inqoba imidlalo emihlanu, badlala owodwa ngokulingana, kweyisithupha eyidlalile, bakwazi ukuvikela isicoco abasinqobe ngesizini edlule.
Injabulo kumaBrazilians ayigcinanga ngabaqeqeshi, umdlali wawo uPeter Shalulile, uthole umklomelo womdlali ovelele kaMeyi.
UShalulile unethuba lokufaka eminye imiklomelo uma iPSL seyenza umcimbi wokuvala isizini ngeSonto eGoli.
Lo mdlali odabuka eNamibia uqokelwe emunxeni wePSL Footballer of the Season lapho ebanga nozakwabo uThemba Zwane nomdlali weMaritzburg United, uThabiso Kutumela. Ubuye waqokwa kwiPSL Player’s Player of the Season nakhona ubanga nabadlali abafanayo. Ukhona nakwiNedbank Player of the Tournament, uqhathwe nabadlali beTshakhuma uNdabayithethwa Ndlondlo nonozinti wayo uWashington Arubi.
UShalulile usangawudla nomklomelo womshayimagoli ovelele, uma engakwazi ukwengeza emgodleni wakhe emdlalweni wakusasa. Njengamanje useshaye amagoli awu-13. Ulandela ngemuva umgadli weSuperSport United, uBradley Grobler ophambili ngawu-16.